Basikety – Coupe du Président : afaka ny Challenger, Ascut II sy Cosmos ary ny ABBC | NewsMada
Challenger (Analamanga), Ascut II (Atsinanana), Cosmos (Diana), ABBC (Boeny). Ireo no ekipa tafita hiatrika ny Play-off amin’ny fiadiana ny “Coupe du Président”, taranja basikety. Tontosa ny faran’ny herinandro teo mantsy ny famaranana tamin’ireo Zones roa, Nord tany Antsiranana sy Centre tany Toamasina, rehefa nizotra nandritra ny herinandro.
Ho an’ny Zone Nord, niatrika ny famaranana ny Cosmos sy ny ABBC. Tafavoaka nandresy ity farany rehefa nandavo iry voalohany tamin’ny isa 86 noho 69 (18/18, 11/27, 15/20, 25/21). Niady ny fihaonan’ny roa tonta teo amin’ny ampahefa-potoana voalohany sy tany amin’ny ampahefa-potoana fahefatra farany amin’ny fe-potoana ara-dalàna.
Ho an’ny Zone Centre indray, samy tafita ny Challenger sy ny Ascut II. Saingy, ny Challenger no tafavoaka nandresy teo amin’ny famaranana rehefa nanilika ny Ascut II tamin’ny isa mazava, 65 noho 47 (13/13, 19/11, 16/10, 17/13). Nifanenjika ihany koa ny isa izay manaporofo fa niady ny fihaonana tamin’izany.
Ankoatra izay, hotanterahina any Mahajanga, ny 27 febroary – 6 marsa izao, kosa ny Play-off izay hikatrohan’ireo ekipa tafita amin’ireo Zones efatra, Nord, Centre, Ouest, Sud.
Nanomboka ny faran’ny herinandro teo ihany koa ny fifanintsanana ho an’ny Zone Ouest, any Tsiroanomandidy sy Zone Sud, any Fianarantsoa.